လေဖြတ်ပြီးနောက် အစာပိုက်ထည့်ခြင်း - Hello Sayarwon
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဖြစ်တဲ့ အစာ/ရေ ကောင်းစွာမမျိုနိုင်ခြင်းဟာ လူနာကို ဒုက္ခရောက်စေပြီး အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ အစာပိုက်ထည့်ဖို့ လိုအပ်လာနိုင်တဲ့အတွက် အစာပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းစရာတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အစာ/ရေ မျိုချခြင်းဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အစာနဲ့ရေတွေကို အစာအိမ်ဆီ လမ်းကြောင်းမှန်မှန် ရောက်ရှိစေဖို့ ကြွက်သားအမြောက်အမြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အစားအသောက် မျိုချရာမှာ ပြဿနာဖြစ်လာပါတော့တယ်။
စားသောက်လိုက်တဲ့ အစာနဲ့အရည်တွေဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ လမ်းမှားဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အစာ/ရေ နင်ခြင်း၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ရာမှာ အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ အဟန့်အတားဖြစ်စေသလို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံလေဖြတ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်လည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
အစာ/ရေ မမျိုနိုင်တဲ့ပြဿနာဟာ ယာယီဖြစ်နိုင်သလို တစ်သက်လုံးမပျောက်တော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့လူနာတွေမှာတော့ ရက်သတ္တပတ်၊ လနဲ့ချီပြီးမှ ပြန်ကောင်းလာတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အစာပိုက်ထည့်ခြင်းက ထိရောက်တဲ့အဖြေဖြစ်ပြီး လူနာကို အသက်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Nasogastric tube (NG tube) – နှာခေါင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ထဲထည့်သော အစာပိုက်
Gastrostomy feeding tube (G-tube) – အစာအိမ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သော အစာပိုက်
Jejunostomy tube (J-tube) – အူသိမ်အလယ်ပိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သော အစာပိုက် ဆိုပြီး အစာပိုက် ၃မျိုး ရှိပါတယ်။
နှာခေါင်းမှတဆင့် အစာအိမ်ထဲတည့်သော အစာပိုက် (NG tube)
NG tube ဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကို ခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲ ထည့်နိုင်တဲ့ အစာပိုက်ဖြစ်ပြီး အစာ၊ ရေနဲ့ ဆေးဝါးတွေကို နှာခေါင်းကတဆင့် အစာအိမ်ဆီ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစာပိုက်ကို လေဖြတ်ထားတဲ့ လူနာတွေအတွက်သာမက ကယ်လိုရီထပ်ဆောင်းလိုအပ်တဲ့ လူနာတွေအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အစာပိုက် ထည့်ပုံထည့်နည်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းနည်းကို သူနာပြုက သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် သူနာပြုကိုယ်တိုင် ထည့်ပေးတာက လူနာအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး အစာပိုက်ကို ချောဆီတစ်ခုခုနဲ့ သုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းကတဆင့် ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်နှာခေါင်းမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေရင် သူနာပြုကို အသိပေးပါ။ ချောဆီသုတ်ပြီးနောက်မှာ အစာပိုက်ကို သင့်နှာခေါင်းကနေတဆင့် လည်ချောင်းထဲအထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကို မျိုချဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အတွက် ခံရခက်နိုင်ပေမယ့် အစာပိုက် လမ်းကြောင်းမှားမဝင်သွားအောင် သူနာပြုပြောတဲ့အတိုင်း ကြိုးစားလိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစာပိုက်ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက် လမ်းကြောင်းမှန်ကန်ခြင်း ရှိမရှိ (အစာအိမ်ထဲ ရောက်မရောက်) ဆေးထိုးပြွန်တစ်ချောင်းကို အသုံးပြုပြီး အစာအိမ်ထဲက အရည်အချို့ကို စုပ်ထုတ်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အစာပိုက်ကတဆင့် အစာ၊ ရေနဲ့ ဆေးဝါးတွေ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အစာပိုက်ဟာ ပိုက်လုံးသေးတဲ့အတွက် အခန့်မသင့်ရင် ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ အစာပိုက်ဘယ်လိုဆေးရမယ်ဆိုတာ သူနာပြုက သင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာရင် အသစ်တစ်ချောင်း လဲလှယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သော အစာပိုက် (G-tube)
G-tube ဒါမှမဟုတ် PEG လို့ လူအများသိကြတဲ့ ဒီအစာပိုက်ကတော့ အရေပြားနဲ့ အစာအိမ်နံရံကိုဖောက်ပြီး အစာအိမ်ထဲ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရတဲ့ ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးသေးပြီး ပျော့ပျောင်းတဲ့ပိုက်ဖြစ်သလို အစာ၊ ရေနဲ့ ဆေးဝါးတွေကို အစာအိမ်ထဲ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ထိပ်မှာကင်မရာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပြွန်ငယ်တစ်ချောင်း အကူအညီနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းပိုင်းကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး ဝမ်းဗိုက်ဘယ်ဖက်ပိုင်းက အရေပြားကို သန့်စင်ပိုးသတ်၊ ထုံဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက် အရေပြားပေါ် ခွဲကြောင်းခပ်သေးသေးပေးကာ အစာပိုက်ကို အစာအိမ်ထဲ တိုက်ရိုက်ရောက်အောင် ထည့်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အစာပိုက်ပတ်ပတ်လည်ကို ပြန်ချုပ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာပိုက်နဲ့ အရေပြားကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းနည်း၊ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့် လက္ခဏာတွေနဲ့ အစာပိုက်ကို ဘယ်လိုဖုံးကွယ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် သင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အူသိမ်အလယ်ပိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သော အစာပိုက် (J-tube)
ဒီအစာပိုက်ကိုတော့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က အရေပြားကိုဖောက်ပြီး အူသိမ်အလယ်ပိုင်းဆီ တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ J-tube ဟာ G-tube နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပေမယ့် ပိုက်ကထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အစာနဲ့ရေတွေဟာ အစာအိမ်ဆီ ရောက်မယ့်အစား အူထဲတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစာပိုက်နဲ့ အရေပြား ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းနည်းကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုက သင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အစာပိုက်ပတ်ပတ်လည်ကို အမြဲသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ ပိုက်ပြန်ထွက်နေရင်ဖြစ်စေ၊ ပိုက်ထည့်ထားတဲ့နေရာမှာ နီရဲရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ပြည် သို့မဟုတ် အနံ့ထွက်ခြင်း ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
အစာပိုက်ထဲ ဘယ်လိုအစာတွေ ထည့်ရမလဲ
အစာပိုက်ဟာ သင့်ကို စားသောက်ရလွယ်ကူအောင်၊ ဆေးသောက်ရလွယ်ကူအောင် အကူအညီပေးတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အစာပိုက် ခဏခဏမပိတ်အောင် ဆေးနဲ့အစာအားလုံးကို အရည်ဖျော်ပြီးထည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အရည်ပုံစံနဲ့လာတဲ့ အာဟာရတွေ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အစာအာဟာရတွေ ထည့်သင့်သလဲဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အစာပိုက်ဟာ အစာ/ရေ မျိုချရခက်ခဲသူတွေအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အစာပိုက်ထည့်ပုံထည့်နည်း၊ ထည့်သွင်းရမယ့် အစာအာဟာရများ၊ အစာပိုက်ထည့်ထားရမယ့် ကြာချိန် စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာထားခြင်းအားဖြင့် လူနာအတွက် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cowen ME, Simpson SL, Vettese TE. Survival Estimates for Patients with Abnormal Swallowing Studies. Journal of General Internal Medicine. 1997;12(2):88-94. doi:10.1046/j.1525-1497.1997.00012.x.
Swallowing problems after stroke fact sheet. https://strokefoundation.org.au/About-Stroke/Help-after-stroke/Stroke-resources-and-fact-sheets/Swallowing-problems-after-stroke-fact-sheet. Accessed April 30, 2017.
Nasogastric feeding tube. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000182.htm. Accessed April 30, 2017.
Feeding tube insertion – gastrostomy. https://medlineplus.gov/ency/article/002937.htm. Accessed April 30, 2017.
Jejunostomy feeding tube. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000181.htm. Accessed April 30, 2017.